Ibsa Hoogganootaa fi Qondaalota ABO Caasaa Biyya Alaa. – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooIbsa Hoogganootaa fi Qondaalota ABO Caasaa Biyya Alaa.
Ibsa Hoogganootaa fi Qondaalota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Caasaa Biyya Alaa.
Fulbaana 27, 2020.
Nuti Hogganootni fi Qondaalotni ABO caasaa biyya alaa tattaffii mootummaa cehumsaa Oromiyaa akkasumas kan biyyoolessaa utubuuf dhaabni keenya itti jiru ilaalchisuun ibsa ballaa ABOn Fulbaana 13, 2020 baase irratti hundoofnee maree gad-fageenya qabu geggeeffatnen waan irra geenye akka armaan gadii kanatti ibsina.
Haala akkaan rakkisaa ta’e keessatti ABOn waggoota lameen dabraniif yeroo cehumsaa bifa jijjiirra xixiqqaan jalqabame milkeessuuf of qusannoo tokko malee humnaa fi hamilee guutuun mootumma Itophiyaa waliin hojjetaa as gahuun ifaa dha. Haa ta’uti yeroon cehumsaa kun gufuulee qaamotni mootummaa fi kanneen sirna dulloomaa impayerichaa deebisuuf ifajjaniin gufatuun abdiin yeroo cehumsaa kanarra kaayyame gara fashalutti deemaa jirachutti dabalee yeroon seera-qabeessummaa (Mandate) mootumman Itophiyaa biyya bulchuuf qabu dhumatuuf yeroon torbaan lama hin caalle qoftiin hafeef keessatti argaman.
Adeemsa kana keessatti naannolleen (Regional States) hedduun bifa adda addaan of gurmeessuun Ummata isaaniif bakka bu’ummaa dhan ittisa kennuuf yeroo itti qophaa’aa jiranitti Oromiyaan biyya abba hin qabne taate hafuun kan gareen hundumtu irratti wal-loluuf deemu ta’uun ishee ifa ta’aa dhufeera jannee amanna.
Kanaaf jechaa Oromiyaa fi Oromoo balaa badinsaa irratti aggaammate jalaa baraaruuf, akkasumas Oromiyaatti sirna fi iggiti itti tolchuuf mootummaa ce’emusaa Oromiyaa utubuun waan dhibbaa dhibbatti itti amanameef Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) itti gaafatamummaa seenaa fi seeraa ofitti fudhatuun humnoota siyaasaa Oromo walaba ta’ani Oromiyaa keessa sossoa’an waliin ta’uun mootumma cee’umsaa Oromiyaa dhugomsuuf itti gaafatama kana fudhatee hojiitti bobba’ee jira.
Kanaas dhugoomsuuf ABOn hunda dura Kongressi Federalisti Oromoo (KFO) waliin ta’uun dirqama mootumma ce’umsaa Oromiyaa dhaabuu fudhatanii humnoota siyaasaa Oromoo walabaa fi Ummata Oromoo balla waliin ta’uun projekti kana dhugoomsuuf hojii bal’aa itti seename kana deggeruun dirqama lammilee Oromoo biyya keessaa fi alaa ta’uu qaba janna.
Bifuma kanaan nutis Hogganootni fi Qondaalotni ABO caasaa biyya alaa tattaffii ABO fi KFO bu’ura godhatuun mata dure “Ani lammii Oromiyaati. Murtoo hundeeffama mootummaa cehumsaa Adda Bilisummaa Oromotiin tahu nan deggera” jedhu ofitti fudhatnee maree bal’aa erga geggeeffatneen booda murtii ejjennoo fi ibsa deggersaa asiin gadii baasnee jirra.
1. Nagaa fi tasgabbi Oromiyaa keessatti dhugoomsuun akkasumas nageenya guutummaa biyyaatti mirkaneessuuf haala mootummaan seerawaa hin jirre keessatti motummaa ce’umsaa Oromiyaa fi akkasumas kan biyyooleessa dhaabuuf murti seena qabeessa ABOn fudhate guutummaatti ni deggerra.
2. Mootummaa cehumsaa Oromiyaa utubuu keessatti hariiroo obbolumma ABO fi KFO jidduu jiru dinqisiifachaa itti gaafatama seenaa fi seeraa jaarmayoonni kun fudhatan hundeen akka mirkanaa’uuf qabeenya, beekkumsaa fi humna namaatiin deggersa guutummaa kennuuf murteeffanne.
3. Humnootni siyaasaa Oromo walaba ta’an, humnootni Hawaasa Oromoo, fi qaamotni akka Oromummaatti ijaaramtanii jirtani martinuu dirqama mootummaa cehumsaa Oromiyaa ijaaruuf ABO fi KFOn ofitti fudhatan cinaa dhaabbattani deggersa guutuu akka kennitaniif waamicha lammummaa isiiniif dabarsina.
4. Ilmaan Oromoo Hojjetaa mootummaa taatan, kanneen miseensa Raayya ittisa biyyaa, Polisi federaalaa fi Oromiyaa, humna addaa, akkasumaas qaama nageenyaa (Security structure) taatan martinu mootumma umriin isaa dhume kanaa waliin hariiro qabdan hatattamaan kutuun tattaffii mootummaa cehumsaa utubuuf taasifamu keessatti dirqama Oromummaa keessani akka baatan gad-jabbeessinee dhaamna.
5. Humnootni Siyaasaa Oromoo, Jaarmiyaaleen ummataa fi Ummatni Oromoo martinuu adeemsa motummaa cehumsaa Oromiyaa dhaabuu keessatti taasifamuun wal qabatee kanneen dhalootanille Oromoo hin taane garuu lammiilee Oromiyaa ta;an hundaaf tika barbaachisu akka taasiftan waamicha isiniif dabarsina.
6. Hawaasni fi Ummatootni Itophiyaa martinu tattaaffi ABO fi KFOn mootummaa cehumsaa Oromiyaa utubuuf godhan ofitti simatuun nageenya waara uumuuf sadarka biyyoolessattis mootummaa cehumsaa uumamu milkeessuuf deggersa barbaachisu akka gootan isinitti dhaammanna.
7. Harcaatuun qaama mootummaa Impayericha fi farreeleen qabsoo bilisummaa Oromoo adeemsa cehumsaa sadarkaa Oromiyaa fi biyyoolessaatti taasifamu gufachiisuuf carraqxan hojii kanarra ammummaan akka of qusattan isin akeekkachiisna.
8. Akkumma Ibsa ABOn Fulbaana 13, 20202 baase keessatti akeeketti milkaa’ina mootumma cehumsaa umamu kanaaf Hawaasni Adunyaa, Gamtaan Afrikaa fi qaamotni Mootummoota gamtoomani deggersa feesisu akka godhaniif waamicha goona.
9. ABOn kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun qaanqee bilisummaa akka urjiitti baroota dheeraaf facaasee Ummata isa ittiin hirmaachisaa ture xumura itti godhuuf boqonnaa murteessaa irra ga’uun waan ifaa dhufeef milkaa’ina tattaaffii kanaatiif of qusannoo tokko malee deggersa barbaachisu hunda kennuuf waada galle haaromsinee jirra.
Injifatnoo Ummata Ballaaf!
ABOn kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromooti!
Nagaa fi tasgabbiin biyyoolessa Mootumma ce’umsaa Oromiyatiin ni mirkanaawa!
Hoogganootaa fi Qondaalota ABO Caasaa Biyya Alaa